Vanhu Vs. Chatbots: Ndiani Achagona Kutarisira Kwevatengi? | Martech Zone
Mugovera, January 12, 2019 Mugovera, January 12, 2019 János Szabó
Kudzoka mu2016 apo chatbots dzakazozivikanwa munhu wese akati vachatsiva vamiririri vevanhu mumadhipatimendi ekuchengetedza vatengi. Mushure mekutora 2.5 makore ezviitiko nezveMessenger chatbots chokwadi chinotaridzika zvakasiyana nhasi.
Mubvunzo hausi wezve chatbots anotsiva vanhu, asi asi kuti mabhatani anogona sei kushanda pamwe nevanhu vakabatana.
Chatbot tech yaive vimbiso huru pakutanga. Kureva kupindura mubvunzo wevatengi nenzira yekutaurirana, uye nekupa munhu senge rubatsiro mune anodzokorora kesi kesi. Zvakazoitika kuti tekinoroji mune yazvino mamiriro haigone kurarama ichi chivimbiso. Chatbots yakashanda pamwe ne70% kutadza chiyero,iyo yakasiya mibvunzo yevatengi isina kupindurwa uye yakagadzira yakaipa vatengi ruzivo.
Facebook yakakurumidza kuita uye kugadzirisa pasi zvinotarisirwa nezve chatbots. Panzvimbo pekushandisa yakavhurika mameseji ehurukuro chatbot vagadziri vakakurudzirwa kuvaka kutonga-kwakavakirwa kudyidzana. UX yakarerukirwa kune chaiyo vatengi vachirovera pane akasiyana mabhatani mukati meMessenger UI. Facebook yakamira kushandisa izwi chatbot uye ikozvino inodaidza aya anopindirana bhatani bots messenger ruzivo. Nedanho iri, iro basa rema chatbots rakachinjawo kubva mukugadzirisa hurukuro kuenda mukugadzira yega-sevhisi (IVR senge) nzira dzeTier 1 mibvunzo yevatengi.
Basa guru re chatbots rakachinja kubva mukutarisirwa kwevatengi kuenda kumabasa anoenderana nekutengesa. MaChatbots anoshanda nhasi senzvimbo yekutanga yekubatana kune vatengi uye vanovimba nekupindira kwevanhu kana mutengi achida zvakanyanya kuomarara.
Uye ini ndinofunga zvakanaka kwazvo saizvozvo!
Iyo Ramangwana reChat-based Vatengi Kuchengeta
Iyo ramangwana rekutaura kwakavakirwa mutengi kuchengetwa ichave iyo yakasanganiswa mhinduro uko bots vari kumberi mutsara uye vanhu ndivo (anowanzo shandiswa) back-up.
Mabhoti anosvika nekukurumidza kune yakakura nhamba yevatengi, uye vanhu vachabata neanogona kutungamira.
Mabhoti achabatsira vatengi kufamba muFAQ semagwaro, uye vanhu vachapindira kana mubvunzo wevatengi wakanyanya kuoma.
Mabhoti achaendesa nzira huru dzekutsvaga kwechigadzirwa, rutsigiro rwekutengesa nenzira inotyisa uye vanhu vanozobata nekukurukurirana kwevatengi.
Ndezvechisikirwo kuti makambani anzwe kuyedzwa kuti asadzikise chatbots achienzaniswa neanodhura uye anowanzochinja-chinja vashandi vevanhu. Uye zvakanaka kushandura iwo mabasa nekutaurirana izvo zvaisada tsitsi dzevanhu. Asi kunzwira tsitsi kwevanhu hakugone kuitwa. Mikana yakakosha yekukura kwechiratidzo inozorora mukuvaka hukama hwepamoyo nevatengi kuburikidza neruzivo rwega. Kana mutengi achinzwa kuchengetwa iye ega anogona kuzotenga zvakare. Nekukwira kwemitengo yekutenga kwevatengi, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti vatengi vaunowana vanodzoka zvakare uye zvakare.
"… Zvirinani" mukuru pane "nekukurumidza."
Nepo vatengi vaifunga kuti mucherechedzo waipa nekukurumidza sevhisi, yaive katanhatu mukana wekuti vabatanidzwe zvakanyanya. Vatengi vakapa iyo mhando yakanaka ratings pane "vanhu" zvinhu (senge mutarisiro wevatengi nekuremekedza uye kuda kubatsira) vaive nekapfumbamwe mukana wekuita zvizere.
Dambudziko nderekuti tsvaga chiyero pakati pehunyanzvi uye kukosha. Iyo kiyi yekuisa kunyemwerera kune ako vatengi kumeso ndeye yekutsvaga iyo chaiyo chiyero pakati zvizere zvakazara mashandiro uye wega kuchengetedzeka.
Neraki, chatbots haisiriyo yega nzira yekuti tekinoroji ingabatsira sei vanhu. Kune nzira dzakareruka dzekuwedzera vamiririri vevanhu kugadzirwa nekudaro uchiwedzera huwandu hwakazara hwekuchengetwa kwega mumiriri wekutaura anogona kupa kune vatengi.
Iko kukanganisa kwekushandisa AI muhukama hwevatengi sevhisi kunogona kutungamira mukudzikiswa kwemabasa ese evatengi emabasa. Panzvimbo iyoyo, mhando dzinogona kushandisa iyo yakawedzera kugadzirwa kuti ipe yakanyanya yakakwira nhanho yebasa neyakaenzana timu saizi. AI inobatsira yekutaura mumiririri neruzivo rwese rwemashure kuti upindure yakaomesesa mibvunzo yevatengi.
"AI ichave tekinoroji yematafura, yakakosha kune chero kambani inoda kuramba ichikwikwidza munzvimbo yebasa revatengi."
Kudzidza kwemuchina kunogona kuwedzera ekutaura evamiriri kugona nenzira inovabvumidza kuti vachengetedze yavo yega kumucheto. Chinangwa chedu paChatler.ai ndechekuchengetedza nguva yevamiriri vekutaura, nekuita kuti zivo yekutaurirana iwanikwe, uye nekukurudzira mhinduro dzakakodzera dzevamiriri vehurukuro kune inouya mibvunzo yevatengi. Chatler.ai inotsiva iro risingabatsiri uye rinodzokorora "tsvaga-kuteedzera-kunama" basa revamiriri vekutaura nekuita rinorema kusimudza basa panzvimbo pevanhu. Iwo akachenjera algorithms anogona kuongorora nhoroondo dzehurukuro uye kukurudzira mhinduro dzemibvunzo inowanzo bvunzwa. Vanhu vanoita sarudzo yekupedzisira uye vanowedzera kubata kwavo kune yega yega meseji kuve nechokwadi chekuti mutengi anonzwa kukosheswa. Chatler.ai muchina kudzidza tekinoroji inobatsira mabhenji kununura nekukurumidza, chaiko, uye inowirirana mhinduro dzevatengi.
ne Chatler.ai iwe unogona kubata iyo yakawedzera nhamba yevatengi yekuchengetedza hurukuro pamwe nechikwata chimwe chete. Rega vanhu vagadzirise hurukuro idzo dzakakosha. Rega AI ikubatsire kunyangwe kana chatbots dzakanamatira.
Tsvaga zvimwe nezve kuti sei Chatler inogona kukubatsira nhasi kununura rakakura ruzivo rwevatengi uye kuwedzera kuvimbika kwevatengi uye kudzikinura.
Saina iyo YeMahara Chatler Akaundi
János Szabó inyanzvi yedhijitari uye nyanzvi yekutaurirana. Mushure memakore anopfuura gumi echiitiko chekushambadzira agency, akagadzira yekuona yekutaurirana app ine inopfuura 10million kurodha pasi. Nhasi, János ari kutungamira timu yeChatler, iyo AI yekufukidza yekutarisirwa kwevatengi.